AbaseMalawi bafuna ukuhamba ngenxa yovalo | News24
AbaseMalawi bafuna ukuhamba ngenxa yovalo
ABOKUFIKA abayi-165 baseMalawi bancamele ukulifulathela leli babuyele ekhaya bayodlala indlala okunokuba baqhubeke nokuba yizisulu zokuhlukumezeka eNingizimu Afrika.
Laba bami ngomumo ukulifulathela leli njengoba belinde eDales Park edolobheni okuyilapho begobe khona amadlangala kusuka ngoLwesithathu olwedlule. Lapha ababekelwe khona ithende lokubakhuselisa yilapho bevakashelwe khona uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal uNkk Weziwe Thusi ngoLwesine.
Ngenkathi elapho uThusi bamtshele ukuthi nakuba abanye babo bengazange bahlaselwe ezigigabeni zakamuva nje kodwa bazibona bengaphephile.
Laba bokufika ababaleke ezindaweni ezahlukene zalapha eMgungundlovu okuyindawo yaseCinderella Park, Emasukwane, Bombay batheleke kule nkundla kusukela ngoLwesithathu olwedlule ngenxa yokusaba emva kuqubuke izigameko zokuhlaselwa kwabokufika kulona leli dolobha.
Bonke futhi bakujabulele ukubuyela emakhaya abo ezweni laseMalawi njengoba bekusemalungiselelweni okuthi kulunge amaphepha abo ukuze bakwazi ukuhamba.
UThusi efika kule nkundla ukhulume nabo, ehamba engena nasethendeni lapho behlaliswe khona. Ubehambisana nobuholi benhlangano ye-ANC kanye nezikhulu zikaMasipala uMngungundlovu kanye noMsunduzi.
“Imbangela yokusuka size sifike lapha kungenxa yokuthi sizobheka njengoba sitsheliwe ukuthi kunabokufika abahlezi kule nkundla. Ukuza kwethu ukuzobheka isimo siphinde sithole nembangela yokuthi ngabe yini ebalethe lapha nokuthi ngabe baphephile yini. Kuyajabulisa ukuthi iningi labo liyasho ukuthi lilapha ngoba lisaba kusukela kwenzeka izehlakalo zokuhlaselwa kwabokufika. Abekho abathi bona bashayiwe. Okunye bayachaza ukuthi nabo bayafuna ukuthi babuyele emakhaya khona ezweni lakubo eMalawi.,” kusho uThusi.
OwaseMalawi uMnuz Alayina Sinova yena uthe ukujabulela kakhulu ukuthi ubuyela ekhaya. Utshele i-Echo uthe kuningi ukuhlukumezeka abakuzwile kuntshontshwa izinto zabo, bethukwa bebizwa nangamagama okucwasa.
Uthe kungcono ukuhamba ayohlupheka ezweni lakubo kunokuthi ahlukunyezwe abantu balapha eNingizimu Africa.
“Iningi lethu ligqekezelwe futhi ubungathi batshelene ukuthi abasihlukumeze ngale ndlela. Abanye bethu bathathelwe izimpahla, abanye bashawa. Yize abanye bengazange benziwe lutho kodwa siyasaba manje asiziboni sisamukelekile futhi sisahleli lapha esinye isikhathi. Okusilungele ukuthi sihambe sibuyele emakhaya ezweni lethu futhi njengoba sonke silapha, sonke sibuyela emakhaya,” kusho yena.
UThusi uthe uma ebabuza ukuthi kungani befuna ukuhamba bakubeka kwacaca ukuthi bazizwa bengasaphephile futhi ngeke baphinde babuye beze kule lizwe.
Unobhala we-ANC esifundeni iMoses Mabhida uMnuz Supa Zuma uthe abakutholile kule nkundla ukuthi iningi labokufika elikhona elaseMalawi. “Esikutholayo ukuthi lezi zakhamizi zaseMalawi zifuna ukubuyela ezweni lazo ngenxa yokwesaba. Abekho abathi bahlukunyeziwe.”
UMnyango obhekelela izinhlekelele eMsunduzi usebenzisana noMnyango wezaseKhaya noMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi ukusiza lezi zakhamizi zibuyele emakhaya.
Kubikwe ukuthi amabhasi azobathatha abayise emakhaya asendleleni kanti futhi nenxusa lezwe laseMalawi lifikile lazokhuluma nalezi zakhamuzi ngoLwesine olwedlule